Taliye Odowaa oo ka hadlay qarax maanta lagu weeraray kolonyo uu la socday – Mudug24
Homewararka DalkaTaliye Odowaa oo ka hadlay qarax maanta lagu weeraray kolonyo uu la socday
Taliye Odowaa oo ka hadlay qarax maanta lagu weeraray kolonyo uu la socday
July 14, 2020 admin wararka Dalka, Wararka maanta 0
Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka Jen. Odowaa Yuusuf Raage ayaa ka hadlay qarax ismiidaamiin ah oo lala beegsaday kolonyo uu la socday oo marayey agagaaarka isbitaalka Xoogga ee magaalada Muqdisho.
Qofka isqarxiyay ayaa watay gaari noociisu yahay Saaruf oo waxyaabo qarxa laga soo buuxiyey, ayaa isku dayey inuu dhexgalo kolanyada Ilaalada u ah taliyaha balse markii uu diiday inuu ka istaago digniin ay siiyeen ciidamada ayaa rasaas lagu furay kadibna halkaas ku qarxay sida laga soo xigtay saraakiil ciidan
Jen. Odowaa Yuusuf Raage oo qaraxa ka dib la hadlay warbaahnta dowlada ayaa xaqiijiyay in bartilmaameedkoodu ahaa isaga balse ciidamada Ilaalada u ah oo aad u foojignaa ay ka hortageen.
“Argagaxisada ayaa soo qaaday weerar fuleynimo oo la doonayey in aniga la igu qaarajiyo balse ILAAHAY mahadii waan ka badbaaday, weerarada noocan ah nagama joojinayaan inaan sii wadno howlaha aan Qaranka u heyno, intii ku shahiiday ILAAHAY ha u naxariisto, kuwa dhaawaca ahna ALLE ha booga dhayo” ayuu yiri taliyaha.
Dhinaca kale, Waxaa jira Khasaaro qaraxa ka soo gaaray qaar kamid ah ciidamadii ilaalinayay taliyaha ciidanka xooga Soomaaliya, waxaa sidoo kale qaraxa uu waxyeelo kasoo gaaray dad shacab ah oo ka agdhawaa goobta uu qaraxu ka dhacay.
Galmudug oo ka hadashay dabkii Magaalada Dhuusamareeb
Kulamo u socda Madaxda Maamul Goboleedyada iyo Warar muhiim ah oo laga helayo